6-da kulan ee gabdhaha ugu fiican Android | Androidsis
6-da kulan ee gabdhaha ugu wanaagsan Android
Haaruun Rivas | 30/06/2021 23:45 | Ciyaaraha Android
Mar labaad waxaan u soo qaadaneynaa boostada isku-duwidda kale ee loogu talagalay Android. Markan waa markabkii gabdhaha, tanna waxaan ku soo aruurinnay ciyaaro gabdhaha ugu fiican oo ka socda Google Play Store.
Isku-dubbaridkan ayaan ku soo qori doonnaa oo ku sifeyn doonnaa ciyaaraha gabdhaha ugu fiican ee loogu talagalay Android, kuwaas oo inta badan loogu talagalay gabdhaha iyo dhalinyarada. Dhammaan cayaaraha aad hoosta ka heli doontid waa bilaash, sidoo kale waa kuwa ugu caansan uguna soo degsada qaybtooda.
Halkan waxaan ku taxnaa taxane ah ciyaaraha gabdhaha ugu wanaagsan ee taleefannada Android. Waxaa habboon in mar kale la muujiyo, sida had iyo jeer aan yeelno, taas Dhammaan cayaaraha aad ka heli doontid boostadan isku-duwidda waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood. Si kastaba ha noqotee, mid ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale abaalmarinno, abaalmarinno, gargaar iyo waxyaabo kale oo badan. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Dukaan waali ah oo lala helay Gabdho taajir ah - Ciyaarta Fashion-ka
2 Dugsiga Sare Saaxiibbada Ugu Fiican: Kooxda Gabdhaha
3 Ciyaaraha Frippa ee gabdhaha
4 Sheekada Hollywood: Icon Fashion
5 Qandho Cunto Karis - Ciyaar Kariyaha
6 Karinta Magaalada - makhaayad iyo ciyaar karinta
Dukaan waali ah oo lala helay Gabdho taajir ah - Ciyaarta Fashion-ka
Qiyaas inaad tahay gabar lacag badan haysata oo ay ku bixinayso dhar badan, dhar, dhar iyo isboorti. Ciyaartan waxaad iskaga dhigi kartaa hal mid oo aad ka dhabeyn kartaa riyadaada ah inaad tahay gabadh milyaneer ah oo leh dhammaan fursadaha adduunka si aad u iibsato wax kasta oo hortaada la dhigo. Adduunyada 'Crazy Shopping' ee gabdhaha hodanka ah waxaad awoodi doontaa inaad fuliso ficil kasta oo aad rabto oo aad kala doorato lixda gabdhood ee ciyaarta laga heli karo.
Waxaad ka dooran kartaa qalab badan si aad ugu labisto gabadhaada sida aad rabto. Xor ayaad u tahay inaad u labisato sidaad rabto, sida aad nolosha dhabta ah u samayn lahayd haddii aad haysato dhammaan lacagta aad ku haysato ciyaarta. U gee timo jaraha sidoo kale dooro timo badan iyo qaabab badan. Wax walba waa suurtagal adduunka Dukaan waali ah gabdhaha hodanka ah. Noqo mid qasab ah sida aad rabto oo aad ugu noolaato nolol raaxo leh, dukaan ilaa bakhaar.
Developer: Ciyaaraha Dharka ee gabdhaha
Dugsiga Sare Saaxiibbada Ugu Fiican: Kooxda Gabdhaha
Kani waa ciyaar kale oo qaab ah oo gabdhaha loogu talagalay halkaas oo aad ku habeyn karto astaamahaaga oo aad uga dhigi karto inay u ekaadaan dhammaan divas. Waxaad leedahay laba saaxiib oo aad ugu fiican oo ku nool dugsi sare kana mid ah kuwa ugu caansan. Kuwani waxay rabaan inay noqdaan kuwa ugu quruxda badan, tan awgeed, waa inaad u labisataa sida boqorada ay rabaan inay noqdaan.
Waxaad ka dooran kartaa xulashooyinka qurxinta badan iyo muuqaalada wajiga, surwaalka, dharka, dushooda, jaakadaha, jaakadaha, goonnada, koofiyadaha, timo-jaraha iyo qalabka sida garbasaarrada iyo muraayadaha indhaha, iyo kuwo kale.
Waxaad isku dayi kartaa qaabab badan oo kala duwan kulankaan. Isku day inaad noqoto arday caqli badan oo leh muxaafid iyo muuqaal muuqaal ah, xiranaya jijimooyin iyo muraayadaha indhaha, tusaale ahaan, ama noqo gabar qaab sassy ah leh oo dooneysa inay adduunka qabsato. Khayaali waa xadka kaliya.
Developer: Labiska Dharka Da'da Yar
Ciyaaraha Frippa ee gabdhaha
Frippa waxaad ku leedahay dhowr ciyaarood oo gabar ah hal. Cinwaankan waxaad ku labbisan kartaa jilayaashaaga sida aad doorbideyso, dharka, dharka, qalabka, dharka iyo waxyaabo kale oo badan. Waad qiyaasi kartaa, waad abuureysaa. Ka dhig gabadhaada sidii boqorad, oo leh dhammaan noocyada ku jira dukaamada iyo buug-yareyaasha cayaartan. Iibso waxyaabo fara badan oo dhalaalaya dabeecadaada oo ka dhig mid ifaya.
Dhinaca kale, waad u geyn kartaa timo jaraha waxaadna ka dhigi kartaa jarista iyo timaha aad ugu jeceshahay, si looga dhigo mid qurux badan dhacdooyinka darajooyinka sare ama nooc kasta oo ay yihiinba. Waxaad sidoo kale ku karin kartaa kulankaan; Cayaar doorka kuugga oo diyaarso cunnooyin dhadhan fiican leh oo wax ku ool ah iyo cuntooyin. Waxa kale ayaa ah inaad adeegsan karto dhar badan, haddii aad rabto. U labbis gabadhaada Halloween ama xaflad kale, dhacdo ama taariikh.
Ciyaartaani waxay ku shaqeysaa internet la’aan, sidaa darteed waad ku ciyaari kartaa meel kasta iyo waqti kasta. Isla mar ahaantaana, waa mid ka mid ah kuwa ugu soo dejisan ee noociisa ah, oo leh in kabadan 10 milyan oo laga soo dejiyay Play Store iyo 4.1 xiddig qiimeyn leh in ka badan 100 oo faallooyin iyo qiimeyn wanaagsan. Waad ka codsan kartaa caawimaadda fashionistas iyo naqshadeeyayaasha si aad ugu muujiso dhadhankaaga hab wanaagsan oo kaa dhigaya mid qurux badan.
Isla mar ahaantaana, waxaad abuuri kartaa ururintaada moodada ah ee aad saxiixdo xiddigaha. Hindiso, naqshadeyso oo ku abuuri cadarkaaga shaambad shaqsiyeed oo noqo megastar dhab ah oo ay la socdaan kumanaan taageerayaal ah oo ku jira adduunka filimka. Waxa kale oo aad ku noolaan kartaa nolol raaxo leh - la wadalbo oo saaxiibbo la yeesho dadka caanka ah intaad booqanayso meelaha sida Beverly Hills, Manhattan, iyo Las Vegas, iyo kuwo kale. Dhinaca kale, wuxuu toogtaa oo duubaa filimada; waxaad caan ka noqon kartaa kulankaan sidii aad horeyba u ahaan jirtay.
Developer: Ciyaaraha Frippa
Sheekada Hollywood: Icon Fashion
Haddii riyadaadu tahay inaad ku dhejiso roogga guduudan ee Hollywood oo aad ka mid noqoto kuwa caanka ah ee ugu caansan magaalada filimka ugu quruxda badan adduunka, ciyaartaas waad ku guuleysan kartaa. Noqo atariisho heerka koowaad ama marwo ah kana qaybgal dhacdooyin heer sare ah dad caan ah, laakiin maahan inaad xirato dharka ugu raaxada badan uguna qaalisan dhamaantiin si aan kuugu arko qurux iyo dhalaal.
U oggolow sawir qaadayaasha iyo paparazzi inay shaqadooda qabsadaan oo ay si faahfaahsan u soo qabtaan waxa aad u egtahay xafladaha galas iyo filimada iyo taxanaha hordhaca ah. Waxaad haysataa dhar iyo qalab badan si aad qaabkaaga uga dhigto midka ugu iftiinka badan uguna cajaa'ibka badan habeenkii oo dhan. Quruxda indhaha saxafiyiinta kula qurux.
Qandho Cunto Karis - Ciyaar Kariyaha
Jacaylka cunno karinta iyo farshaxanka cunnada waa wax la siiyo gabdhaha in ka badan inta wiilasha, sida caadiga ah. Tani waa si sax ah sababta ku jirta qoraalkan uruurinta ee ciyaaraha gabdhaha ugu fiican ee loogu talagalay Android ciyaar kuugga lama seegi karin.
Ciyaartan waa inaad ka farxisaa dhadhaminta kala duwan. Macaamiisha makhaayada u imanaya aad bay u baahan yihiin, markaa waa inaad u diyaarisaa cuntada sida ugu fiican ee suurtogalka ah. Waad kari kartaa wax kasta oo ka bilaaban suxuunta qaaliga ah illaa cuntada qurxan ilaa macmacaanka iyo macmacaanka macaan. Waxaa jira in ka badan kun suxuun iyo cuntooyin aad ku karin kartid Qandho Cunto Karis - Ciyaar Kariyaha ah. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu fudud uguna adag.
Waxaad dooran kartaa meelaha aad doorkaaga kaga ciyaari doontid cunto kariye. Ka istaag goobaha yaryar ama maqaayadaha waaweyn ee raaxada leh. Waxay noqon karaan Hindi, Shiine ama dhaqan kale oo gastronomic adduunka ah. Iyaga ka dhig kuwaaga oo u qurxi sidaad u jeceshahay. Macaamiishaada ka dhig kuwo ku raaxeysanaya dhismahaaga oo u fidiya adeeg sare. Dabcan, waxaad diirada saartaa sidii aad uga gudbi laheyd heerarka jira: waxaa jira in kabadan 1.000, mid walbana wuu ka adagyahay kan kale. U adeegso farsamooyinkaaga cuntada sida aad uga adkaato oo aad naftaada ugu sharraxdo sida cunugga adduunka ugu fiican.
Ciyaartani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'Play Store', mana aha oo keliya noocyadeeda, laakiin dhammaan qaybaha oo dhan, maadaama ay leedahay in ka badan 100 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn 4.3-xiddig leh oo ku saleysan in ka badan 4 milyan iyo dhexdhexaad faallooyinka wanaagsan iyo qiimeynta ku jirta dukaanka Google ee loogu talagalay Android.
Karinta Magaalada - makhaayad iyo ciyaar karinta
Ku sii wadida ciyaaraha karinta, waxaan haynaa Magaalada karinta - makhaayada iyo ciyaarta karinta, cinwaan kale oo, in kastoo ay ahaan karto wiilasha, markan waxaa loogu talagalay gabdhaha. Halkan waxaad ku karin kartaa oo ku diyaarin kartaa wax kasta oo ka yimaada cuntada qashinka ah illaa suxuunta qurxoon ee leh diyaarinta adag.
Waad duban kartaa cuntada sida loo kariyo iyo keegga macaan. Xitaa, samee kafee iyo wax walba oo aad qiyaasi karto. Ma jiraan wax xaddidan maaddaama ciyaartan ay tahay inaad karsato suxuunta adduunka oo idil, laga soo bilaabo kuwa ugu caansan waddan kasta illaa kan ugu dhif iyo naadirka ah.
Sida cayaaraha kale ee kujira qoraalkan uruurinta, Magaalada karinta - makhaayada iyo ciyaarta karinta uma baahna qadka internetka in lagu ciyaaro, sidaa darteed waad karin kartaa waqti kasta, meel kasta. Had iyo jeer waxaa jira waqti lagu farxo cunnada iyo macaamiisha. Karso burgers, waffles, shiilan, pizza, iyo dhammaan noocyada qashinka iyo cuntada aan caafimaadka qabin Ama, halkii, kariyo suxuunta cuntada ee habboon si aad u ilaaliso caafimaadka. Waxaa jira boqolaal cunto karis ah iyo xulashooyin aad ku diyaarin karto. Had iyo jeer waad kala duwanaan kartaa.
Dhinaca kale, Waxaa jira in ka badan 300 heerar oo ay tahay in la buuxiyo si uu u noqdo kuugga ugu fiican adduunka. Marka hore way fududahay, laakiin waxaad heli doontaa dhibaatooyin iyo caqabado ay kujiraan saacado si diyaarintaadu uga dhigto mid tartamaya waqtiga. Kaamil qaabkaaga oo noqo sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid.
Waxaad heli doontaa dhammaan qalabka, maacuunta iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku karsatid dhammaantood, iyo sidoo kale maaddooyin cusub oo tayo sare leh, iyo mid kasta oo ka mid ah cuntooyinka ay ku jiraan macmacaanka iyo suxuunta wanaagsan. Isla mar ahaantaana, waxaad ka shaqeyn kartaa in ka badan siddeed maqaaxiyo oo aad caan ku tahay adduunka cunnada.
Magaalada karinta - makhaayada iyo ciyaarta karinta waa cinwaan kale oo weyn waana mid ka mid ah cayaaraha ugu fiican ee wax lagu kariyo ee ku yaal Play Store, waana sababta aan ugu darnay isku soo aruurinta kulamada ugu wanaagsan ee gabdhaha ku jira Android.
Developer: SADDEXAAD MAGIC
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 6-da kulan ee gabdhaha ugu wanaagsan Android
Sida loo soo celiyo qaabkii hore ee Android
Google wuxuu dhammeeyaa qaabka APK bisha Ogosto si loogu helo AAB